बिदेशमा भएकी चेलीको हेर्नै नसकिने भिडियो लिक भएपछि (+१८ ले मात्र हेर्नु) किन गरिन्छ यस्तो? - Alert Khabar
Homeमनोरञ्जनबिदेशमा भएकी चेलीको हेर्नै नसकिने भिडियो लिक भएपछि (+१८ ले मात्र हेर्नु) किन गरिन्छ यस्तो?
बिदेशमा भएकी चेलीको हेर्नै नसकिने भिडियो लिक भएपछि (+१८ ले मात्र हेर्नु) किन गरिन्छ यस्तो??
हामी माया अनि अरुमा बिश्वासमा परेर आफ्ना गोप्य सूचना वा गोप्य अंग पनि आफ्ना बिश्वासिला प्रेमीप्रेमिका बिच आधन प्रदान गर्छौ जुन केही दिनका लागि राम्रो भएपनी जुन दिन प्रेमी प्रेमीकाको सम्बन्ध सकिन्छ तब यस्ता भिडियोहरु बजारमा आउछन त्यसैले तपाईं चेलीहरु कसैको पनि बिश्वास नगर्नुस फेरि तपाईको हाल्त पनि यस्तै बन्न सक्छ । जनहितमा जारी फेरी पनि येस्ता घटना नदोहोरियोस सावधान रहनुहोला
दुई बहिनी बने एकैदिन गर्भवती बनेपछि उनीहरुले बच्चा जन्माउने दिनको प्रतिक्षा सुरु भयो । रोचक र अनौठो त के भयो भने दुवैले एकै दिनबच्चलाई जन्म दिए । त्यो पनि जुम्ल्याहा बच्चलाई । घटना हो अमेरिकाको ओहियोको । जहाँ दुई अलग अलग आमाबाट जन्मिएका बच्चाहरु खासमा चम्ल्याहा अर्थात् एकसाथ जन्मिने चार जुम्ल्याहा हुन् । अझ रोचक त के छ भने गर्भवती भएका दुई दिदी बहिनीका पति भने एउटै हुन् ।